धन्य कोरोना ! ती मेरी आमा - Rajdhani Daily News
Home बिचार धन्य कोरोना ! ती मेरी आमा
आमा ! मलाई थाहा छ, तिमी यतै कतै छ्यौ । मेरो सुत्ने कोठाको भित्तामा झुन्ड्याइएको तिम्रो तस्बिरले मलाई खाना पाकिसक्यो, खान आइज भनी बोलाएको मेरा यी कानहरूले कैयौंपटक टाठै सुनेका छन् । हिजो–आज किन हो कुन्नि ! अनायासै मेरो मुटु तिम्रो यादमा भक्कानिन्छ । तिमी मेरो स्मृतिको मानसपटलमा चलचित्र सरी चलिरहन्छ्यौ । तिमी र म भेलखोलाको उकालोमा अघिपछि हिँडिरहेको देख्छु । मालिबनको भीरमा सँगसँगै घाँस काटिरहेको देख्छु । तिमी मलाई घाँसको भारी बाँध्न सिकाइरहेकी हुन्छ्यौ । अनि घाँसको भारी बाँधिसकेपछि तिमीले आफ्नो फाटेको धोतीको आँचलमा बाँधेकोे कनिका र तिल आफूले नखाई खान दिन्छ्यौ र मलाई एकतमास हेरिरहन्छ्यौ । मानौं, तिमी ध्यानमग्न छ्यौ । म फेरि कनिका माग्छु । तिमी झस्किन्छ्यौ । कनिका सिद्धिएको म तिम्रो भावभंगीबाट थाहा पाउँछु । मेरो भोक नमेटिएकोमा तिमी खिन्न हुन्छ्यौ । आजकाल एकटकले म तिम्रो तस्बिर हेरिरहन्छु । अनि मलाई तिमी कनिका दिन खोज्छ्यौ, म थाप्न खोज्छु तर एक्कासी झल्यास्स हुन्छु । आजभोलि यस्तै–यस्तै भइरहेको छ । यत्रो ठूलो जहानबच्चाका लागि मैले कसरी चामल, नुन, तेल र दाल जोहो गर्दो हुँ भनेर तिमीलाई पीर पर्दो हो अनि सायद तिमी मलाई यसरी कनिका दिन खोज्दी हौ ।
आमा, तिमीले जे सोचिरहेकी छ्यौ, त्यो साँचो हो । म काठमाडौंको चार भञ्ज्याङभित्रको एक पुरानो घरको छिँडीको कोठामा सरकारले जारी गरेको लकडाउनको निर्देशनको जकडबन्दिमा छु, भित्तामा झुन्ड्याइएको तिम्रो तस्बिरसँगै । घरभवन तथा सडक निर्माण कार्यहरू बन्द भएकाले तिम्री बुहारी र म काम गर्न जान नपाएको पनि आधा महिना जति नै भइसक्यो । पट्यार लागिरहेको छ, म बेचैनी र छटपटीमा छु । मलाई अचाक्लि सकस छ । भएको चामल, नुन, तेल, दाल अब सिद्धिन थाल्यो । खाद्य पसलमा दैनिक उपभोग्यका सामग्रीहरूको आपूर्ति कम भएको छ, रे । भन्छन्, नगद हुँदा पनि दाल, चामल पाउन कठिन छ । खल्तीमा सुको पैसा छैन । ऋणसापट गर्ने सबै ठाउँमा हात थापिसकेको छु । साहूले अब उधारो नदिने र पुरानो चुक्ता गर्नुपर्ने उर्दी गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अब के गर्ने भन्ने चिन्तामा छु । म तिम्रा नातिनातिनाको मुखमा माड कसरी लगाउने भन्ने उपाय खोजिरहेको छु तर कुनै उपाय पनि सुझेको छैन । जहानबच्चा कसैलाई कोरोनाले छोइहाल्यो भने के गरुँला भन्ने त्रासले समेत मन पिरोलिइरहेको छ ।
दुई दशकअघि एकाबिहानै झिसमिसेमा सहर जान हिँडेको त्यो दिन सम्झिन्छु, सम्झिन्छु अनि राते कुकुरले मलाई डिलबगरसम्म पछ्याएको । सायद रातेले मलाई घर फर्कांै भन्दा मैले नमानेपछि दुःखित हँुदै फर्केको हुनुपर्छ, त्यतिबेला । तिमीले पनि भनेकी थियौ, उहिले मानिसहरू राजाले देश निकालाको सजाय सुनाउँदा मात्र गाउँ छोड्थे । तिमीले के बिराएका छांै र गाउँ छोड्दै छौ सहर छिर्नलाई । सहर छिर्नु भनेको देशनिकाला हुनुसरी हो । देश निकालाको सजाय भुक्तान गर्नु जस्तै हो । कुनै बखत गाउँ छोडी सहर छिरेकाहरू अचेल जन्मभूमिको यादमा छटपटिरहेका छन् । आजकल उनीहरूलाई ‘जन्म दिने आमा र जन्मभूमि स्वर्गभन्दा पनि प्यारो हुन्छिन्’ भन्ने चेतले लखेटिरहेको छ । सहरमा महमा डुबेको मौरीजस्तै जीवन बाँच्न बाध्य भएका छन् । उनीहरू अब चाहेर पनि गाउँ फर्कन सक्ने स्थितिमा छैनन् । त्यसैले तिमी पनि गाउँ नछोड ।
बर्खामासमा लेकमा गाईभंैसी पाल्नुपर्छ, मोही पार्नुपर्छ, घिउ जम्मा गर्नुपर्छ अनि खोलामा पानी घट्ट चलाउनुुपर्छ । जलदेवीलाई पुज्नुपर्छ । खोला वरपर फोहोर गर्नुहुन्न, दुवाली छेकी रसायन–विषादी हालेर माछा र गंगटा सखाप पार्नुहुन्न । माछा र गंगटाहरू पनि ईश्वरकै अंश हुन् । हिउँदमा बेसी झर्नुपर्छ । गेडागुडी, गुन्द्रुक, ढिंडो खाउँला । गुज्जरी भंैसी छँदै छ, दुहौंला अनि टन्न दही, मही, घिउ खाउँला । तर, त्यतिबेला तिम्रा यावत कुराहरू मैले सुनेको नसुनेझंै गरी म सहर हिँडे । जुन, कर्मको फल म आज भोग्दै छु ।
तिमीले भन्थ्यौ, पुर्खाका गाथा गाँस्नुपर्छ, आफ्ना कथा कहनुपर्छ । असल भइन्छ, जान्ने भइन्छ । हामी त विद्वान बन्ने ध्याउन्नमा रहेछौं, आमा । असल हुने पाटो छुटेछ । आँखा मात्रै हाम्रा रहेका छन्, दृष्टिकोण अर्कैको बनेका छन् । मथिंगल मात्र हाम्रो छ, सोच्ने दिमाग अर्कैको बनेको छ । बौद्धिक दासताको जीवन जिउनुपरेको छ । आफ्नो गौरव–गाथा बिर्सिइएछ, अरूको कथा कण्ठाग्र गरिएछ । विडम्बना ! हामी पहिचानको कुरा गर्छौं तर हाम्रो पहिचानको रेखांकन अर्कैले गरिदिन्छ । त्यति बेला मैले तिम्रा कुरा गम्न सकिनँ ।
तिमी भन्थ्यौ, बरु खोरिया खेती गर्नुपर्छ, बिरौटामा धान रोप्नुपर्छ । ढिँडोपिठो खानुपर्छ । पाखुरा बलिया हुन्छन् । अहिले पो पत्तो भयो, ढिँडो, अदुवा, पुदिना, बोझो, टिमुर, वेसार आदि मसाला र खानेकुरा मात्र होइनन्, औषधि पो रहेछन् । पल्लो घरका बाजे एक शताब्दीको उमेरमा ठमठमी हिँड्न सक्नुको रहस्य यो पो रहेछ । हाम्रो जिब्रो मात्र आफ्नो रह्यो, स्वाद अर्कैको बस्यो । बनिबनावट पोका, बट्टा, साँधेका, तारेका, तेल र मसालायुक्त खाद्य परिकारमा हाम्रो रस बस्यो, लत लाग्यो । महीको सट्टा बोतलका झोलपदार्थ, ढिँडोको सट्टा पिज्जामा दिलचस्प भइयो । फलाहारको सट्टा मांसाहार गर्न थाल्यौं ।
तिमीले भन्थ्यौ, चोरले पनि आफ्ना छिमेकका १० घर बिराएर मात्र चोर्छ । ऐंचोपैंचो गरी गर्जो टार्नुपर्छ, आफूलाई चाहिँदा लिनुपर्छ, छिमेकीलाई चाहिँदा दिनुपर्छ । दान गर्नु अर्को जुनीलाई साँच्नु हो । छिमेकी के चाहिएला र, कहिल्यै नसोच्नु, कुनै समय छिमेकीको चुल्होको खरानीका लागि हारगुहार गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । भmुटो बोल्नुहँुदैन, जालझेल गर्नुहँुदैन, पाप लाग्छ । यो सबै तिम्रो असल छिमेकीपन, ‘बशुधैव कुटुम्बकम’् को आधारशीला रहेछ तर आजकल यहाँ यस्तो विचारको प्रधानता कहाँ छ र । मानिस एकलकाँटे बनेको छ । हरेक सम्बन्ध र व्यवहार उसले पैसामा साट्न खोज्छ । सक्दो अकूत सम्पत्ति जम्मा गर्छ, कालोबजारी, जम्माखोरी अनि अवैध धन्दा चलाउँछ । मानवता हराएको छ ।
तिमी भन्थ्यौ, रूख काट्नु हुन्न, सिकार खेल्नुहुन्न । वनदेवी रिसाउँछिन् । वनदेवीको आराधाना गर्नुपर्छ । यसो गरे सह हुन्छ । वास्तवमा, तिमीले मलाई पारिस्थितिक प्रणालीप्रतिको सुचेत ममा सञ्चारित गर्न खोजेकी रहिछ्यौ तर मैले बुझ्न सकिन । वनदेवीलाई ढुंगो देखें, खोलाको जललाई सिर्फ पानी अनि माछा र गंगटालाई फगत मेरो सिकार ।
एक दिन हामी घाँस काटेर चंखेली लेकबाट फर्किर्दै थियौं । गौरीपाटनको थुम्के पोखरीको छेउमा थकाइ मार्न भारी बिसायौं । भोक र प्यासले रन्थनाएको थियो । सधैंझैं तिमीले मलाई कनिका र तिल दियौं । म खाँदै थिएँ । बेलुकीको सिरसिरे हावाले थुम्के पोखरीको पानीमा एकनास तरंग पैदा गरिरहेको थियो । तिमी केहीबेर हरायांै, तरंगसँगै । केही समयपश्चात् अनायासै बर्बराएसरि भन्यौ, रम्भा बहिनी र मेरा दौंतरीहरू बाल्यकालमा यसै पोखरीमा भैंसीलाई पानी खुवाउन ल्यााउँथ्यौं । अहिले को कहाँ पुगे, को कहाँ गए । धेरै जनाको त त्यति बेला फैलिएको झाडापखालाले सिकार बनायो । मानिसले गाउँमा तामसि भोजन गर्न सुरु गरे । ध्यानधर्म गर्न छोडे । सामाजिक कार्य गर्न छोडे । उच्छृंखल भए । गाउँघर सफासुग्घर गर्न त्यति मतलब गरेनन् । त्यसैले देवी रिसाइन् । झाडापखाला फैलियो । एक शव जलाएर फर्किने बित्तिकै अर्को शव भइसकेको हुन्थ्यो । गाउँमा शवदाह गर्नका लागि काठपात सिद्धिसकेको थियो । झाडापखाला लागेको विरामीलाई पानी र झोलिलो चीज ख्वाउनुहँुदैन । खायो भने बिरामी झन् जोखिममा पर्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त थियो ।
रम्भा बहिनीलाई त्यति बेला अनौठो संयोग प¥यो । रम्भा उनको बाबुआमाको एक्लो सन्तान थिइन् । उनका बुबाआमाले उनलाई औधी माया गर्थे तर उनलाई पनि झाडापखालाले समात्यो । भmाडापखाला भएकोलाई मानिसको बस्तीबाट टाढा गोठमा राख्नुपर्छ नत्र अरूलाई सर्छ भन्ने सोच थियो । उनी पानी–पानी भनि छटपटाइरहेकी थिइन् । गाउँका आधा जति मानिसलाई झाडापखालाले खाइसकेको थियो । सबैलाई उनी अब बाँच्दिनन् भन्ने लागेको थियो । उनलाई पनि घरबाट टाढा गोठमा राखियो । पानीका लागि छटपटाएको छोरीको पीडालाई उनका बाबुआमाले खप्न सकेनन् । आफ्नी छोरीको अन्तिम इच्छा पूरा गरिदिन्छांै भनी एक कसौंडी पानीसहित घरदेखि टाढा गोठमा छोडिदिए । अचम्म त के भने उनी महामारीबाट जोगिइन् । उनले प्रशस्त पानी पिइछिन् । पानीले उनको ज्यान जोगाएछ । हामीले झाडापखाला लाग्दा पानी पिउनुपर्छ भन्ने कुरा धेरै पछि मात्र थाहा पायौं । पानीले मानिसको ज्यान जोगाउँछ, झाडापखाला लाग्दा पानी खानुपर्छ भन्ने थाहा भएको भए सायद झिर्कुली बहिनी र अरूहरू पनि बाँच्थे होलान् । कान्छा ! तिमी त स्कुल जान्छौ, तिमीलाई थाहा होला नि, मान्छे मरेपछि कहाँ जान्छ होला ? म अक्क न बक्क भएँ ।
साँच्चै भनौं भने आमा, तिम्रो प्रश्नको जवाफ मैले मेरो चालीसको उत्तरार्धसम्म पनि पत्ता लगाउँन सकेको छैन । गुरु–गुरुआमाले विद्यालय, महाविद्यालय र विश्वविद्यालयमा कहिल्यै पनि मलाई पराभौतिक विज्ञान, नीतिशास्त्र, तन्त्रविद्या पढाएनन् । आत्मा र परात्माका कुरा सिकाएनन् । सिकाए त, केवल अणुशास्त्र, अस्थिप्रणाली, अर्थतन्त्र र अंकगठन । यी विद्याले मलाई बुद्ध र अरूलाई बुद्धु देख्ने बनाएको छ । पराभौतिक विज्ञान र नीतिशास्त्र त अब कुविद्याको कोटीमा दर्ज गरिएका छन् । माफ गर आमा, मैले तिम्रो प्रश्नको उत्तर खोज्न सकिनँ ।
अनि आमा, हाम्रो कस्तुरीको जस्तो हालतलाई पनि माफ गर्नु । जसरी कस्तुरी आफ्नो नाभीमा भएको विनाको वास्नाको पत्तो नपाई वास्ना सँुघ्न सारा जंगल चाहर्छ । जंगल चाहर्दा चाहर्दै रन्थनिएर रनभुल्लमा परेको मौका छोपी सिकारीले कस्तुरीको सिकार गर्छ । हाम्रो हालचाल पनि योभन्दा भिन्न कहाँ छ र, आमा । हामी पनि कस्तुरीजस्तै आफ्नो वास्नाको भेउ नपाई अरूको बनिबनाउ ‘परफ्युम’ सँुघ्ने ध्याउन्नमा छौं । प्राचीन तथा वैदिक परम्परालाई अरू कसैले हिजोआज खडा गरिदिएको तुलोमा जोख्न खोज्छौं । तिनीहरूमा खोट खोज्छौं । अरूले बद्लिदो परिस्थितिमा आफू र आफ्ना परम्परालाई सच्याएको हामी हेक्का राख्दैनांै । हाम्रा कमसल–कमजोर पक्ष सुधार्नु र असल तथा वैज्ञानिक पक्षको पक्षपोषण गर्नु आफ्नो कर्तव्य सम्झिदैनांै । बरु अरूले बनाएको बनिबनावट चालढाल तथा रीतिथितिबाट अनुप्राणित हुन्छांै । हामी कर्तव्यच्युत छांै । आमा, माफ गरे !